Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Zvita, 10, 2020
Munhu mumwe chete ofa nechirwere cheCovid-19 muHarare nezuro apo huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwadarika zvuru gumi nechimwe kana kuti 11 000.
Muzvare Marry Mubaiwa, Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika VaConstantino Chiwenga wavari kunetsana naye vomiswazve pamberi pedare kunyangwe vari kuratidza kuti hutano hwavo hauna kumira zvakanaka.
Nhasi tiri kuenderera mberi nekuzeya nhoroondo yaAmbuya Nehanda uye nyaya yechiumbwa chavo.
Dare repamusoro soro muAmerica roramba kutambira chikumbiro chebato remaRepublicans chekuti sarudzo dzeku Pennsylvania dzinzi hadzina kufambiswa zvakanaka.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzozeya kunakurirana nyoka mhenyu kwavepo pakati pehurumende nebato reMDC Alliance zvichitevera kuputswa kwedzimba dzinonzi nemakanzuru dzakavakwa zviri kunze kwemutemo.
Muchirongwa chedu cheLiveTalk Womens Round Table chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muhupenyu hwavo na 8 pm nhasi, tiri kutarisa zuva rekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day riri kucherechedzwa nhasi mushure mekupera kwemazuva gumi nematanhatu ekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga mudzimba. Tichatarisawo nezvesarudzo dzemuAmerica umo